Kumnandi ukuba sekhaya emva komsebenzi onzima wosuku kwaye uncokole nabo bantu kwincoko yevidiyo ye-roulette abemnandi kakhulu kwaye abafuna ukuxoxa nangasiphi na isihloko. Kodwa kuyenzeka ukuba awufuni nyani ukunxibelelana nomntu. Kwaye emva koko ungamsusa njani undwendwe? Okanye ungayiqala njani incoko? Kwaye ugqiba njani? Kwaye ngokubanzi, ungabafumana phi abo bangeneleli? Yonke le neminye imibuzo emininzi ingaphendulwa nge-Chat Roulette. Roulette yengxoxo sisixhobo esikhethekileyo esenzelwe ukuba abantu banxibelelane ngaphandle kweengxaki. Ukuze wonke umntu abe nethuba lokukhetha iqabane lonxibelelwano kwaye ungathetha kwaye uphelise incoko ukuba kukho into angayithandiyo. Kuzo zonke ezi kunye nezinye iimeko ezininzi, ingxoxo ye-roulette inokubakho xa iluncedo. Le yinkonzo ethandwayo kangangokuba abantu kwihlabathi jikelele beyisebenzisa iminyaka eliqela. I-Chatroulette ifumana amandla mihla le. Izigidi zamadoda nabasetyhini, amakhwenkwe namantombazana aya kwesi sibonelelo kwaye anxibelelana. Banxibelelana ngenjongo yolonwabo, ukulungiselela ukufumana amava onxibelelwano, ukulungiselela ukuhlangana, ukulungiselela ukufumana abahlobo kunye nomtshato wabo. Kwaye kuyayolisa. Yiya kwindawo kwaye uncokole naye nabani na. Kukho, ewe, izithintelo, kodwa malunga nazo emva kwexesha elincinci. Ngoku makhe sihlolisise amathuba ale ncoko ye-roulette ekwi-Intanethi.
Ke, i-Chat Roulette inemithetho ethile kunye nezithintelo. Lilonke, le migaqo ilula kwaye kunokwenzeka ukuba uyithobele. Kodwa makhe ndibone imigaqo esisiseko. Nantsi ke ngoku:
Izithintelo zeminyaka engama-
. Iindwendwe zokuncokola kufuneka zibe neminyaka eli-18 ubuncinci. I-
Awunakuxoxa nantoni na kwincoko evunyelwe ngumthetho. I-
Awunakho ukubonelela ngeenkonzo zesondo. I-
, yonke into enxulumene nobugrogrisi ayinakuphakanyiswa. I-
awukwazi ukuthuka i-interlocutor nangasiphi na isizathu: isini, ubuhlanga, umdla, njl njl
Ngokomgaqo, le yeyona mithetho isisiseko emayilandelwe ngaphandle kokusilela. Ukongeza, kuyinqweneleka ukunxibelelana ngentlonelo kunye nokwamkela umngeneleli njengoko enjalo. I-Chatroulette yenza zonke iinzame zokuqinisekisa ukuba iindwendwe ziziva zizithembile kwaye zikhululekile nakweyiphi na imeko. Kule nto, imigaqo esezantsi yenzelwe ukwenza ukuba ubomi kwincoko bulungele bonke abasebenzisi balo vimba ubalulekileyo. Ukuba ulandela le mithetho, ke unxibelelwano luya kuba luyolo. Kwaye abo bangeneleli baya kwaneliswa kwaye banike ithuba lokuthetha kwakhona. Ukuba imigaqo ayilandelwa kwaye izikhalazo zabanye abasebenzisi zifunyenwe, iakhawunti yomsebenzisi efumana izikhalazo kwaye ophula imithetho yengxoxo inokuvalwa. Nawuphi na umsebenzisi we-roulette yencoko ungathunyelwa kwisibhengezo ukuba wophula imithetho emayigcinwe.Ukuze uye kwincoko ngokwayo kwaye uqalise ukuncokola, uya kudinga oku kulandelayo:
ikhompyuter okanye umnxeba
Kwaye unokunxibelelana, njengoko besitsho, ngaphandle kokunqunyulwa. Unokwenza nantoni na ngokoqobo: ukuhleka, ukuhlekisa, ukuxoxa, kwaye ngokubanzi wonwabe kwinkampani yabo bantu ubathandileyo. Le yeyona nto inomtsalane kwiProjekthi yeRoulette yeprojekthi. Apha unganxibelelana kuphela nabantu abathandana kakhulu kwaye ofuna ukunxibelelana ngakumbi. Isibonelelo sokusebenzisa iRoulette yengxoxo kukuba awudingi kakhulu ukufumana unxibelelwano. Yikhompyuter okanye ifowuni efanelekileyo kunye ne-Intanethi. Ewe, ndisafuna umboko. Kwaye apha kungcono ukuba ungagcini. Emva kwakho konke, i-microphone esemgangathweni elungileyo iya kunika ithuba elihle lokuva kakuhle kwaye izise iingcinga zakho kwi-interlocutor yakho ngelizwi elimnandi nelifakisayo, ngaphandle kokuphazanyiswa kunye nezinye izinto ezinokuphazamisana nomgangatho wombhobho omncinci.
Unxibelelwano kwindawo yokuxoxa kwi-intanethi yevidiyo roulette uhlala uzisa uyolo ngesizathu sokuba umsebenzisi ngamnye wesi sibonelelo anethuba elihle lokukhetha. Kodwa phakathi kokukhetha, makhe sijonge. Ke, ukhetho lunokwenziwa:
I-97 007 phakathi kwexabiso lonxibelelwano: ihlawulwe kwaye simahla
phakathi konxibelelwano oluqhelekileyo kunye nemodi yePrimiyamu
Ukhetho lwabangeneleli banokuhlawula okanye kusimahla. Oku kuyakubekwa phantsi kulwazi oluthile olukhethwe ngumsebenzisi ngokukhethekileyo kunxibelelwano. Kwizibonelelo ezithile bavunyelwe ukuba bakhethe isini somngeneleli simahla, kodwa kwezinye abavumelekanga. Ke, apha kuya kufuneka ujonge imigaqo kunye nakwimenyu yengxoxo.
Ukukhetha phakathi kweempawu ezihlawulelweyo kunye zasimahla kuyabonakala. Kuyo nayiphi na i-roulette yengxoxo, unokukhetha isicwangciso sokunxibelelana okanye simahla. Into ephambili apha kukujonga ezo zikhetho ezinikezelwayo kuyo nayiphi na imeko.
Ukhetho phakathi konxibelelwano kwimodi yesiqhelo nakwindlela yePrimiyamu ikwanikwa umsebenzisi ngamnye. Imowudi eqhelekileyo ihlala inikezelwa simahla. Kodwa kwiPremiyamu kufuneka uhlawule. Ixabiso lingatshintsha kwaye litshintshe ngokuhamba kwexesha.
Ke kukho ukhetho. Kwaye msebenzisi ngamnye uzenzela olu khetho. Kwizibonelelo ezithile zolu hlobo, ikwanikezelwa ukuba ingakhethi kuphela isini sonxibelelwano, kodwa ilizwe elinabahlali endithanda ukuthetha nabo. Kananjalo kwezinye iisayithi unokukhetha umsebenzi okanye izinto onomdla kuzo, okanye iminyaka kunye nezinye iiparameter. Isixhobo ngasinye silawula olu khetho ngokokubona kwalo. Ke ngoko, lo mbuzo ufuna ukucaciswa ngaphambi kokuba ubhalise kulwazi kwaye uthathe isigqibo sokunxibelelana kwi-Intanethi nomngeneleli ongenamkhethe.Babonakala ngamava abo. Ukuziphatha kwabasebenzisi kunye nemithetho iyalela umbandela wabo. Akukho zithintelo zingako kwiziza zangoku, kodwa zikhona. Umzekelo, izithintelo zobudala. Ubudala bomsebenzisi akufuneki bube ngaphantsi kweminyaka eli-18.
Umsebenzisi akufuneki asebenzise i-roulette yencoko ye-intanethi njengeqonga lokuthengisa okanye njengendawo yogaxekile. Oku kunqatshelwe yimithetho kuninzi lwezi zibonelelo. Oku kuyaqondakala. Emva kwayo yonke loo nto, abantu beza apha ukuze banxibelelane, kwaye kungenjalo ukuze babukele intengiso okanye basasaze i-spam.
Kwizibonelelo ezininzi ezinjalo, kusenqatshelwe ukuvala i-webcam ukuze kungacaci ukuba ngubani othetha nawe. Ubuso bomngeneleli buhlala bubonakala. Kodwa kwezinye iimeko unokuthetha unganxibelelani nekhamera yewebhu, kodwa ngokuncokola kunye nembalelwano.
Indawo yokuncokola yanamhlanje inokundwendwelwa ngendlela eyinzuzo kumhambi. Ungasebenzisa incoko kwinguqulo ehlawulelweyo okanye yasimahla. Xa ukhetha uguqulelo lwasimahla, unganxibelelana lula naye nawuphi na umntu. Unokuvula ngokuchanekileyo, ukucima nokucima ukuba kukho into engahambanga kakuhle. Kodwa ezinye iiparameter kunye nezibonelelo zisasikelwe umda xa undwendwela le ncoko simahla.
Utyelelo oluhlawulelweyo lubonelela ngamathuba ngakumbiindwendwe ngalinye. Imowudi ehlawulelwayo ikuvumela ukuba undwendwele indawo ngokungaziwa kwezinye iincoko zeengxoxo. Incoko engaziwa inokwenziwa ngokungqalileyo ukuze abasebenzisi bangabhengezi imbonakalo yabo kwesi sibonelelo. Ingenziwa ngeenjongo ezahlukeneyo. Kwaye ngeenjongo ezahlukeneyo. Ngotyelelo oluhlawulweyo, ezinye iinketho zisebenza. Umzekelo, ukhetho lokudala abangeneleli abathandayo. Usebenza kakuhle. Emva kwayo yonke loo nto, kuyaziwa ukuba i-chat roulette inika ukhetho lwabangeneleli abangaqhelekanga. Kodwa ngamanye amaxesha umntu onxibelelanayo uyonwaba kakhulu kangangokuba ndifuna ukuqhubeka nokunxibelelana naye kwixa elizayo. Ukhetho oluhlawulwayo lenza ukuba kunokwenzeka ukongeza abo bangenelelayo kuludwe lwabantu onokuthi uqhubeke nonxibelelwano ngalo naliphi na ixesha.
Ukongeza, xa ubhatalela incoko, kukho elinye ithuba: unxibelelwano lwabucala. Oku kuthetha ukuba unokunxibelelana kuphela nomntu othile kwaye wenze oku ixesha elide. Ukuba uyayithanda incoko, ungaqhubeka nayo kamva.
Umsebenzi "woluhlu oluMnyama" luyafumaneka kwiinguqulelo ezihlawulelweyo nezasimahla. Oku kuququzelela kakhulu inkqubo yokuncokola zombini kwimodi yokuxoxa nakwimodi yevidiyo.
Inzuzo ephambili yeseshoni ehlawulelweyo ibangelwa kukuba umntu ufumana amalungelo awodwa amalungelo. Kodwa ngokubanzi, ukuba ukhetha unxibelelwano lwasimahla, akukho mntu uya kukhubazeka kunxibelelwano. Ngokuchasene noko, inkqubo yonxibelelwano ngokwayo ayizukubandezeleka kancinci ukuba isimahla.Umzekelo, ukukwazi ukukhetha ividiyo yencoko kunye nengxoxo. Ewe, nawuphi na umsebenzisi, akukhathaleki ukuba ufikelele okanye ahlawulwe simahla kulwazi, unokukhetha ukuba uza kunxibelelana njani. Kwaye unikezele nge-interlocutor yakho ngale ndlela. Ukuncokola okanye ukuncokola kwimodi yevidiyo kunokukhokelela abasebenzisi kubahlobo abatsha okanye kubantu nje abathandekayo abaya kongeza iimvakalelo ezintsha kunye namava amatsha.
Ngaphandle kokunxibelelana okumnandi kunye nokunxibelelana okumangalisayo, i-roulette yencoko ingadinwa ziingxaki ezithile. Umzekelo, ingozi. Abo beza kwincoko ye-roulette okokuqala bawa kwihlabathi lokungaqhelekanga kunye nolwazi. Kwaye ngoku masibone ukuba yintoni ekufuneka uthathele ingqalelo ekhethekileyo xa unxibelelana kwaye kufuneka uhlale ulungiselele ntoni:
Okokuqala, i-roulette yengxoxo ibandakanya utshintsho olukhawulezayo nolula lwamaqabane onxibelelwano. Oku kuthetha ukuba ungatshintshela umntu olandelayo ngokucofa iqhosha. Iyonwabisa. Kodwa kwangaxeshanye, kufanelekile ukukhumbula ukuba ungakhawuleza utshintshiselane ngomnye umngeneleli. Ke ngoko, kufanelekile ukuba ulungiselele oku. I-
Kwincoko engaziwa, akukho mntu wazi mntu. Unokuza namagama amatsha, iifani, indawo yokuhlala. Ungasebenzisa naluphi na ulwimi kunxibelelwano, nangona kukho iincoko ze-roulette ezenzelwe ulwimi olunye. Umzekelo, isiNgesi. Okanye isiRashiya. Uninzi lwezi nkonzo zenzelwe iilwimi ezahlukileyo ngokupheleleyo. Ke ngoko, apha ungadlala ngokukhuselekileyo indima yomphambukeli. I-
chat roulette ibandakanya ngokuyintloko ukuzonwabisa, hayi ukuthandana okukhulu. Ke, musa ukuwuthatha ngokungqongqo loovimba. Le yinkonzo yolonwabo, kungoko iye yathandwa. Kwaye musa ukujonga apha kubaqhelileyo abaphambili ukuze uqhubeke. Nangona kukho izinto ezizodwa. Ngokukodwa ukuba ukhetha inkonzo ethandwayo kwingingqi yakho okanye kwisixeko. I-
dating yasimahla inomdla kwi-scammers ezininzi ezifuna ukwenza inzuzo kubasebenzisi abathembekileyo. Nangona inkonzo yezokhuseleko ihlala isebenza kwaye iphendula ngokukhawuleza kwi-Chatroulette yale mihla, ithuba lokudibana ne-scammer liselikhulu kakhulu. I-
Ukongeza kubuqhetseba, kukwakho zonke iintlobo zabantu ezinokubonisa amalungu amalungu omzimba onqunu. Yohlwaywa ngesibhengezo, kodwa usenokudibana nobuntu obunjalo. Kule meko, unokumane ubhale isikhalazo okanye ucofe iqhosha elifanelekileyo. I-
Roulette wengxoxo namhlanje utsala inani elikhulu labantu. Kuyayolisa, kodwa kwelinye icala, ithuba lokudibana nabantu abangafanelekanga liyanda. Ukukhangeleka kwehlaya elisebenzayo kunye ne joke ezahlukeneyo nazo ziyathandwa. Umzekelo, iprankers zikhethe i-roulette yengxoxo kwakudala. Yisebenzise ukuze udume.Ungayibona njani iprankster xa unxibelelana ne-Anti-Chat okanye nayiphi na enye intetho engxoxo? Ukusukela kwixesha lokuqala kunokuba nzima, kodwa kunokwenzeka ukuba ungayenza. Nazi iingongoma zokuchonga iiprankers:
Ingubo engaqhelekanga inokunika iiprinta. Njengomthetho, bakha ividiyo ukuze bayonwabele kwaye bayilungiselela ngononophelo. Iingubo zabo ziphantse ziobugcisa kwaye aziqhelekanga. Impahla kufuneka iqhubele i-interlocutor kwi-stupor phantse ukusuka kwisibini sokuqala sonxibelelwano. Ke ngoko, ukuba une-interlocutor phambi kwakho kwimaskhi okanye kwiingubo ezirhoqo, oku kunokuba yinto epranker. Kwaye kuphela unokuthatha isigqibo sokuba uza kunxibelelana naye ngakumbi okanye ungamfuni omnye umntu. I-
amahlaya arekhodwa ukuba amnandi kwaye ngenxa yokuthandwa. Ipranker inokuba nomsindo okanye, ngokuchaseneyo, intle kakhulu. Unokwenza into echaseneyo nendlela yokuziphatha eqhelekileyo. I-
injongo yabo kukurekhoda iimvakalelo kunye nokuphendula kukuziphatha kwabo. Bazama oku kwaye bazama iindlela ezahlukeneyo. Kodwa umahluko wabo ophambili ukusuka kubangeneleli abaqhelekileyo kukuba benza into enokubangela iimvakalelo ezinamandla kwi-interlocutor: ukumangala, umsindo, ukuhleka, ihlazo kunye nezinye iimvakalelo ezinamandla. I-
I-roulette yencoko yeyona ndlela yanamhlanje yonxibelelwano kubantu banamhlanje. Ukuba awunalo ixesha lokuphuma uye ebantwini, ukuba uneentloni zokunxibelelana nabanye abantu, ukuba awuyazi indlela ongavumiyo ngayo umntu oza kuncokola naye, incoko ye-roulette iya kuba yindawo entle yokuqeqesha. Apha unokufunda ukuqala incoko nabantu ongabazi ngokupheleleyo. Apha unganxibelelana ngokulula nabantu abathandileyo. Uyeke ukunxibelelana nabantu abangakuthandiyo. Into ephambili kukuziphatha ngobuntu ngaxeshanye, ube yinto ethandekayo yokuthetha kwaye ukhumbule ukuba kwelinye icala lesikrini kunabantu. Ngubani oza ku-Chat roulette ukwenzela ukuba wonwabe kunye nawe kwaye uxoxe ngayo yonke into esemhlabeni.